ယုန်လေး ရဲ့ MTV နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြင်းပြင်း ထန်ထန်တုန့်ပြန်ပြောဆို လာတဲ့ အမေစု သက်တော်စောင့်မလေး ချယ်ရီထက် – Let Pan Daily
ယုန်လေးကတော့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေ နဲ့ အနုပညာလောကထဲ စတင်ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ သရုပ်ဆောင်၊ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ ပါဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးလာခဲ့သူပါ။ ကိုဗစ်ကာလ ရိုက်ကူးရေးတွေရပ်နားထားစဉ်မှာတော့ သီချင်းတွေဘက်ပြန်လှည့်ကာ သီချင်းကောင်းတွေ ပြန်လည်ဖန်တီးရင်း ပရိသတ်ကို ဆက်တိုက် ချပြနေသူပါ။
ဒီနေ့မှာတော့ သူနောက်ဆုံး ဖန်တီးထားတဲ့ ငါတို့အားလုံး ရဲ့မြေ (စည်းလုံးသင့်ပြီ မြန်မာပြည်) ဆိုတဲ့သီချင်းလေး ကို ချပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီ MTV နဲ့ ပက်သက်ပြီး အမေစုရဲ့ သက်တော်စောင့် ဖြစ်တဲ့ ချယ်ရီထက် က သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ် အကောင့်ကနေ ခုလို တုန့်ပြန်ပြော ဆိုထားပါတယ်။ ”
ပေးချင်တဲ့ message က ဘာလဲ ????ဘာပြောချင်တာလဲ
မကြိုက်ဘူး😡😡😡😡😡(စော်ကားတာလား)” ဟုရေးသားထားပါတယ်။ လူမူကွန်ရက်ပေါ်မှာလဲ ယခုMTV နဲ့ပက်သက်ပြီး ဝေဖန်မူအများအပြား ရှိနေတာလဲဖြစ်ပါတယ်။
crd : popping
ယုနျလေး ရဲ့ MTV နဲ့ ပကျသကျပွီး ပွငျးပွငျး ထနျထနျတုနျ့ပွနျပွောဆို လာတဲ့ အမစေု သကျတျောစောငျ့မလေး ခယျြရီထကျ
ယုနျလေးကတော့ အဆိုတျောတဈယောကျအနေ နဲ့ အနုပညာလောကထဲ စတငျဝငျရောကျလာသူဖွဈပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ သရုပျဆောငျ၊ဒါရိုကျတာအနနေဲ့ ပါဇာတျကားပေါငျးမြားစှာကို ပုံဖျောရိုကျကူးလာခဲ့သူပါ။ ကိုဗဈကာလ ရိုကျကူးရေးတှရေပျနားထားစဉျမှာတော့ သီခငျြးတှဘေကျပွနျလှညျ့ကာ သီခငျြးကောငျးတှေ ပွနျလညျဖနျတီးရငျး ပရိသတျကို ဆကျတိုကျ ခပြွနသေူပါ။
ဒီနမှေ့ာတော့ သူနောကျဆုံး ဖနျတီးထားတဲ့ ငါတို့အားလုံး ရဲ့မွေ (စညျးလုံးသငျ့ပွီ မွနျမာပွညျ) ဆိုတဲ့သီခငျြးလေး ကို ခပြွခဲ့ပါတယျ။ ဒီ MTV နဲ့ ပကျသကျပွီး အမစေုရဲ့ သကျတျောစောငျ့ ဖွဈတဲ့ ခယျြရီထကျ က သူမရဲ့ ဖဘေု့တျ အကောငျ့ကနေ ခုလို တုနျ့ပွနျပွော ဆိုထားပါတယျ။ ”
ပေးခငျြတဲ့ message က ဘာလဲ ????ဘာပွောခငျြတာလဲ
မကွိုကျဘူး😡😡😡😡😡(စျောကားတာလား)” ဟုရေးသားထားပါတယျ။ လူမူကှနျရကျပျေါမှာလဲ ယခုMTV နဲ့ပကျသကျပွီး ဝဖေနျမူအမြားအပွား ရှိနတောလဲဖွဈပါတယျ။
အသညျးယားစရာ ပုံစံ အမြိုးမြိုး လုပျပွနေ တဲ့ မတျမတျသငျဇာ ရဲ့ ဗီဒီယို